युएस बंगला विमान दुर्घटना :३६ जनाको शव निकालियो, एक दर्जन बढीयात्रुको उद्धार ! – ebaglung.com
युएस बंगला विमान दुर्घटना :३६ जनाको शव निकालियो, एक दर्जन बढीयात्रुको उद्धार !
२०७४ फाल्गुन २८, सोमबार १६:१२	Home Slider, Top News, प्रमुख समाचार
काठमाडौँ २०७४ फागुन २८ । त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमान स्थलमा दुर्घटनाग्रस्त युएस बंगला विमानमा उद्धार कार्य जारी रहेको छ । ढाकाबाट आएको ड्यास–८ विमान दुर्घटना भएको हो । पछिल्लो समाचार श्रोतका अनुसार हाल सम्म ३६ जनाको यात्रुको शव विमानबाट बाहिर निकालिएको छ भने एक दर्जन भन्दा बढी यात्रुको उद्धार गरी विभिन्न अस्पतालमा उपचारार्थ लगिएको छ । अस्पतालमा पुर्‍याइएको मध्ये ८ जनाको मृत्यु भएको छ।
विमान अवतरणका क्रममा धावनमार्गबाट बाहिर पट्टी गएर विमान दुर्घटनाग्रस्त भएको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन् । विमान अनियन्त्रित अवतरण गरेको पनि उनिहरुले बताएका छन् । प्राप्त जानकारी अनुसार चालक दलका चार जना सदस्य सहित विमानमा ६७ जना यात्रु सवार थिए । घटनास्थलमा उद्दारका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र विमानस्थलका कर्मचारी तथा वारुण यन्त्रसहितको ठुलो टोली परिचालित छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विमान दुर्घटनाबारे जानकारी लिनविमानस्थल पुगेका छन् ।
उद्दारकर्मीका अनुसार विमानमा पूर्णरुपमा जलेका शवहरु फेला परेका छन् । विमान दुर्घटनामा धेरै यात्रुहरु हताहत भएको अनुमान अधिकारीहरुले गरेका छन् । विमानमा नपालीहरुको संख्या पनि धेरै रहेको विमानस्थलमा चर्चा गरिएको छ ।